Hattummaa dhabamsiisuurratti gareedhaan duulamuu qaba
Jaarraa 21fa kana keessa malaammaltummaan keessumaa biyyoota guddinarra jiranitti hammaataa waan dhufeef akka mootummaa shanaffaatti ilaalamaa jira.
Kunis, hannaafi saamicha qindaa’aa namoota dhuunfaafi gareetiin kan raawwatamu waan ta’eef, jireenya hawaasummaa kan jeequ, guddina dinagdee biyyaa kan quucarsu, sirna gabaa bilisaa kan balleessu, sirna ijaarsa dimokraasii kan quucarsuufi abdii ummata biyya tokkoo kan dukkaneessu waan ta’eefi.
Akka Itoophiyaattis gochi akkanaa yeroo yerootti tooftaasaa jijjiirrachuun biyyattiitti babal’achaa waan jiruuf, hatattamaan ittisuun murteessaa ta’uu Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad Roobii darbe Yaa’ii 4fa Walta’insa Farra Malaammaltummaarratti haasaa taasisaniin ibsaniiru.
Akka isaan jedhanitti, malaammaltummaan hanna ykn saamicha qindaa’aa namoota dhuunfaafi gareetiin waajjiraalee mootummaa, mitmootummaa, dhaabbilee amantiifi kkf keessatti raawwatamuudha. Gocha kana hambisuuf ammoo kallattiilee garagaraatiin osoo hin dubbatamiin ykn hinbarsiifamiin hafee hinbeeku jedhaniiru.
Biyyoota Afrikaa keessaa gocha kanaan badaa maqaan isaanii kan hindhahamne 10 yoo ta’an, Itoophiyaan biyyoota kanneen keessatti ramadamuu dhabuunshee qaanessaadha jedhaniiru.
Kunimmoo biyyi keenya boolla hattootaafi saamtotaa ta’uushee kan mul’isu waan ta’eef, yeroo gabaabaa keessatti gocha kana maqsuun dirqama jedhaniiru. Kana gochuuf ammoo mootummaa dadhabaan akka hinhundeeffamne keessumaa miidiyaaleen hubannoo uumuu akka qaban hubachiisaniiru.
Hundaa ol ammoo hojmaata mootummaa keessatti iftoominniifi ittigaafatamummaan dhibamuun gocha kana kan babal’isu waan ta’eef, miidiyaaleen seerota, dambiiwwaniifi qajeelfamoota mootummaan yeroodhaa yerootti baasu hordofanii hawaasa maraa barsiisuu akka qaban hubachiisaniiru. Kunimmoo hawaasni hattootaafi saamtota akka saaxilaniif kan haala mijeessu ta’uusaati jechuudha.
Kanaaf, miidiyaaleen yeroodhaa yerootti akka mootummaa shanaffaatti kan ilaalamaa jiru, gocha malaammaltummaa maqsuuf hojii hubannoo uumuu itti fufiinsaan kan hojjetu taanaan hattoottniifi saamtotni mataasaanii dhokfatanii qabeenya ummataa qisaasessaa jiran umurii dheerachuu kan danda’an mitii jedhaniiru.
Kanuma waliin ammoo aadaan boodatti hafaa hannaafi saamicha jajjabeessu akka hafuuf midiyaaleen hojii bal’aa hojjechuu qabu jechuun hubachiisaniiruu. Maatiinis naamusni daa’immanii gara gaariitti akka deemuuf dursanii irratti hojjechuu qabu jedhanii, barsiisotni amantiis barsiisa naamusa gaarii itti fufiinsaan kennuu qabu jedhaniiru.
Alberti Inistaayin, “Addunyaan kun kan isheen baddu namoota jallina hojjetaniin osoo hintaane namoota jarreen kana callisanii ilaalaniini” jedhan jechuun qaamolee gocha malaammaltummaa raawwatanirratti gareedhaan duuluun murteessaa ta’uu ibsaniiru.
Torban kana/This_Week 7713
Guyyaa mara/All_Days 1817133